Ogaden News Agency (ONA) – Wa-Khitaamuhu Misk – ayuu ahaa Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya ee lagu qabtay Nairobi
Wa-Khitaamuhu Misk – ayuu ahaa Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya ee lagu qabtay Nairobi
Posted by ONA Admin	/ February 26, 2014
Waxaa magaalada Nairobi ka dhacay xaflad sidii looga bartay jaaliyadda Nairobi ay u soo agaasimeen hab aad moodo inay ugu talagaleen inuu u noqdo (وختامه مسك) baroordiiqda ay jaaliyadaha ku xusayeen Maallinta Xasuuqa Ogaadeeniya (Ogaden Massacre Day).
Xaflada baroordiiqda ah waxaa soo qaban qaabiyey ururka OYSU Faraciisa Nairobi waxaana kasoo qaby galay dadwayneaad u tirabadan oo ka kala yimid daafaha magaalada.
Sidoo kale waxaa munaasabada kasoo qayb galay masuuliyiin kamid ah JWXO iyo marti sharaf ka kala timid wadamda USA, UK iyo Carabaha. Dad waynihii munaasabada kasoo qayb galay oo dhamaantood ay ka muuqatay shurcuur aad u saraysa iyo murugo aan laqiyaasi Karin ayaa ugu horayn waxaa shirka furay xoghayaha ururka OYSU Nairobi Mudane Qadri Faarax Maxamuud.
Qadri ayaa waxa uu dadwaynaha sharaxaad kooban kasiiyey ujeedada munaasabada iyo danta loo qabtay oo uu sheegay inay tahay in mar walba la xusuus naado xasuuqa ka dhaca ogaadeeniya iyo in hiil iyo hooba lala garab istaago Hooyada iyo Gabadha Ogaadeeniya ee dhibaatadu ku dhacayso mar walba.
Masuuliyiintii munaasabada ka hadlay waxaa kamid ahaa Mudane Maxamed Shariif Cumar oo dadwaynihii madasha fadhiyey ku guubaabiyey waajibka ka saran daryeelka iyo waxtarka guud ahaan dhibanayaasha Ogaadeeniya gaar ahaan kuwa kusugan Xeryahay Qaxootiga Kenya.
Waxaa jawigii munaasbadu halmar isku badashay muruqo iyo oohin ka dib markii laga shiday meesha muuqaalo xanuun badan oo katurjuma baaxada uu le egyahay xasuuqa iyo tacadiga lagu hayo guud ahaan shacabka Ogaadeeniya gaar ahaan Gabdhaha Ogaadeeniya
Mid kamid ah muuqaaladii laga shiday munaasabadii maanta ayaa waxa ay gabdh kamid ah gabdha ogaadeeniya ku calaacashay “Anaga dilka iyo xadhiga waxaa nooga daran oo ay askarta Ethiopia nagula kacaan waa “KUFSIGA”.
Munusaabada maanta ayaa waxa kaloo lagusoo bandhigay suugaan halgameed ka turjumaysa dhibaatada Ogaadeeniya.
Munaasabadii maanta ayaa waxa ay hayd mid si gaar ah ubadashay shucuurta kasoo qayb galayaashii waxa aadna ku arkaysay maanta munaasabada dawayne isugu jira rag iyo dumar oo aad ula murugaysan waxa Ogaadeeniya kasocda ama ka dhacay ee xasuuq ah.